Mombamomba An’ilay Nahazo Ny Loka Nobel-n’ny Literatiora, Pablo Neruda, Mahatonga Adihevitra Momba Ny Fanolanana Any Shili · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2015 18:28 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Italiano, Português, Ελληνικά, English
Tsongan'asan'ny bokin-tononkalon'i Pablo Neruda. Sary natambatr'i Tetyana Lokot.
Nahatonga resabe sy adihevitra momba ny kolontsainan'ny fanolanana ao amin'ny fiarahamonina anjakan'ny lehilahy (lehilahy tery saina), ny fanehoan'ilay Shiliana mpanakanto, Carla Moreno, an'ilay poeta malaza eo amin'ny firenena Pablo Neruda, narahana tamin'ny famakiana ny fehezanteny nosoratany mikasika ny fiarahany tamin'olona fony izy tanora, izay mety tsy nifanekena loatra.
Ny fametrahana farany tao anatinà andiana filazalazàna mahatsiravina ny mombamomba ireo olo-malaza, ampahatsiahivin'ny fonon'ireo boky milaza zavatra foronina ny mombamomba an'ilay Nandrobaka ny Loka Nobel-n'ny Literatiora miaraka amin'ny tay kely miforetaka eo amin'ny lohany, eo ambanin'ny teny faneva hoe “Lehilahy Tery Saina An-dàlam-pivoarana.” Lazaina ho famoahana vaovao amin'ny raki-tahirin'ilay mpanoratra “Mibaboka Aho Fa Niaina Izany” (1974, taorian'ny nahafatesany), mivaky toy izao ny an'i Moreno “Mibaboka Aho Fa Nanolana,” arahan'ilay hoe “vehivavy iray mahantra, mainty, Tamil, saranga Pariah fony aho Kaonsily tany Kolombo”.
Filazalazàn'ilay Shiliana mpahay kanto, Carla Moreno, ny mombamomba an'i Pablo Neruda “Mibaboka Aho Fa Nanolana,” narahin'ilay hoe “vehivavy iray mahantra, mainty hoditra, Tamil, saranga Pariah fony aho Kaonsily tany Kolombo.”
Manamafy ny asany i Moreno, tamin'ny fanimbàna ny andàlana iray nosoratan'i Neruda, milaza ny zavatra niainan'io farany io fony izy kaonsilin'i Shili tany Sri Lanka (avy eo tao Ceylan) nandritra ny taona 1920. Nitombo fitsiriritana mafy an'ilay vehivavy nanadio ny toeram-pidiovany isa-maraina, notantarainy ny fomba nahazoany azy nony farany ary nanaovany firaisana ara-nofo taminy, na dia tsy namaly ny fangatahany mihitsy aza ilay vehivavy.
Indray maraina, nanapa-kevitra ny hanao ny azoko atao rehetra aho, ary nisambotra azy tamin-kery tamin'ny tànany ary nibanjina azy teo amin'ny tavany. Tsy nisy fiteny afaka niresahako taminy. Namela ahy nitondra azy izy tsy nitsiky, ary avy eo nitanjaka teo ambony fandriako. Ny vatany tena mahia kely, ireo valahany feno, ireo nonony toy ireo kaopy feno loatra, nanao azy ho tena toy ny sary sikotra efa an'arivo taonany maro any atsimon'i India. Toy ny fiarahan'ny lehilahy iray aminà sary sokitra ilay izy. Nanokatra ny masony foana izy, tsy nihetsika. Rariny ny azy raha nankahala ahy izy. Tsy niverina intsony izay zavatra izay.
Nilaza ny fahefàny tamin'ilay vehivavy i Neruda, ary ny hoe ahoana ny nanaovany azy ho toy ny zavatra avy any amin'ny tany mafana. Araka an'i Moreno, notondroiny ho “Tsy toy ny olona, tsy mitovy aminy” izy. Satria nanampy izao izy:
Araka izay dia natao ho tahàka ny zavatra natoraly tokoa ny kolontsainan'ny fanolanana sy ny fanavakavahana, ka afaka mampiditra ao amin'ny tantarany ny fanolanany ho toy ny zavatra iray mahatsikaiky fotsiny ao amin'ireo fahatsiarovany ny lehilahy iray manampahefana, fotsy, ary tsy MISY NA INONA NA INONA mitranga.
Tao amin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny ElDesconcierto, nanamafy izao i Vanessa Vargas Rojas:
Lasa navadika ho tondron-kolontsaina ahafantarana an'i Shili amin'ny tany tontolo, tsy nametrahana fanntaniana ny endrik'ilay poeta tamin'ireo karazan-javatra niseho teo amin'ny fiainany, mifanohitra tanteraka amin'ny an'ireo vehivavy mpanakanto malaza avy any Shili sahala amin'i Violeta Parra na Gabriela Mistral, izay voatsikera lava amin'ireo fifandraisany amin'ny resaka reny sy zanaka ary ny firaisana ara-nofo.
Raisin'ny tany tontolo ho iray amin'ireo poeta goavan'ny taonjato faha-20 i Neruda. Ampahan'ny lova ara-kolontsaina an'i Shili sy Amerika Latina ny asany. Nafangarony tamin'ireo hetsika ara-politika ihany koa ny asa sorany. Ho fanampin'ny asany maha-diplaomaty azy, ny taona 1945, voafidy tao amin'ny Antenimiera izy ary nanjohy ny Antoko Kaominista. Telo taona taty aoriana, raha nifindra niankavanana ny governemanta Shiliana, niaraka tamin'ny filoha Gabriel González Videla izy, ary nanambara fa tsy ara-dalàna ny kaominisma, nenjehana tao amin'ny fireneny i Neruda ary nisy fotoana voatery nanao sesintany ny tenany nandritry fotoana vitsy. Mpanoratra ny “Twenty Love Poems” (Poeziam-pitiavana roapolo) sy ny “Song of Despair” (hiran'ny fahaketrahana), maty ny 23 Septambra 1973, tao Santiago, Shili izy.
Ho an'ireo mpankafy ireo poezia malazany, nanohina loatra ilay famborahana:
Miresaka ny fanolanana ireo poezian'i Pablo Neruda, nahoana ny olona no mankalaza azy ho “poeziam-pitiavana”
tsy afaka atao poezia mihitsy ny fanolanana, na avy amin'i Neruda aza. — kali-mathangi (@_youlendree) March 3, 2014
Ahoana ny fijerinareo ilay ampahany momna ny fanolanana ao anatin'ny raki-tahirin'i Neruda? Ity fanindrahindràna tafahoatra ny fahaterahana ity. Fihetseham-po maro.